Shacabka ku nool degmooyinka Hilawaa iyo kaaraan oo DFS codsi Cajiiba u diray? | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Shacabka ku nool degmooyinka Hilawaa iyo kaaraan oo DFS codsi Cajiiba u...
Shacabka ku nool degmooyinka Hilawaa iyo kaaraan oo DFS codsi Cajiiba u diray?
Iyadoo degmooyinka Hiliwaa iyo Kaaraan dhowr jeer ay ka dhaceen isku dhacyo u dhaxeeya ciidamo ka wada tirsan dowladda ayaa waxaa cabasho arinkaasi ka muujinaya dadka shacabka ah ee ku nool degmooyinkaasi.
Maxamed Cabdule Cadow oo kamid ah dadka deganaaa Degmada Hiliwaa, balse haatan uga barakacay sababo la xiriira ciidamo ku dul dagaalama ayaa waxaa uu Warbaahinta u sheegay in inta badan ay ku dul dagaalamaan ciidmada dowladda, taasina ay keentay in ay sii daganaan waayeen xaafadahooda waxaana uu ka dalbaday dowladda Somalia in arinkaasi wax laga qabto si ay ugu laabtaan guryahooda,islamarkaana ay dayactir ku sameystaan.
Degmooyinka Hiliwaa iyo kaaraan ayaa waxaa dhowr jeer sanadkaan gudahiisa ka dhacay isku dhacyo geystay dhimasho iyo dhaawac oo dhexmaray ciidamo ka wada tirsan dowladda,iyadoo ay sidoo kale isku dhacyadaasi saameeyeen dadkii deganaa xaafahada lagu dul dagaalamay.
Gudoomiyaasha Kaaran iyo Hiliwaa ayaa, dagaalada degmooyinkaasi ka dhaca waxba ka qaban iyaga og dhibaatooyinka soo gaaraya shacabka ,aay masuulka u yahiin.